ကာတွန်း ATH ရဲ့ လမ်းကြောင်း (မိုးမခ) မေ ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - ATH
“မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် က၀ိအို အိမ်ပြန်နိုင်ပြီလား” ဒေါက်တာစိန်ဝင်းနဲ့ အင်တာဗျူး (မိုးမခ) မေ ၇၊ ၂၀၁၈ (ဓာတ်ပုံ – ၀ါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်က ပြတိုက်တခုမှာ သားငယ် ပြည်လရောင်စိန်ဝင်းနဲ့အတူ တွေ့ရစဉ်) ဧပြီလ တတိယပတ်နှောင်းပိုင်းက NLD ပါတီရဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ၊ သုတေသီတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်ကျော်ဟန်က သူ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ – “အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အမြဲတန်းနေထုိုင်ခွင့်ကဒ် ရရှိထားပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသား မခံယူထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများမဟုတ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်များ မိခင်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျောက်ထားလိုပါက လျောက်ထားနိုင်သည့် အချက်အလက်များ” ကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းကို ထပ်မံဆက်သွယ်ပြီး ပြည်တော်ပြန်နိုင်ဖို့အရေး ဘာတွေကို သက်ဆိုင်ရာက တုန့်ပြန်ထားသလဲ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နေသလဲ ဆိုတာ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ (မိုးမခ) – ဆရာဒေါက်တာစိန်ဝင်းခင်ဗျ … ဦးခင်ကျော်ဟန်က သူ့စာမျက်နှာမှာ...
ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – မှားပြီးရင်းမှား သစ်ပြီးရင်းသစ် (မိုးမခ) မေ ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သာလှ
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇၁) (မိုးမခ) မေ ၇၊ ၂၀၁၈ ● CPB မြေအောက်လုပ်ငန်း CPB ၏ မြေအောက် (UG ) စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းသည် တောတွင်းနှင့်နယ်စပ်၌ အခြေခံစခန်းဖွင့်လှစ်တိုက်ခိုက်နေသော အ ဖွဲ့အစည်းတခုအနေနှင့် မြို့ပေါ်စည်းရုံးရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေးပါသောလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ် ပဲခူးရိုးမပါတီဗဟို မကျမီအထိ CPB ၏မြေအောက်တာဝန်ခံမှာ သခင်ချစ်ဖြစ်သည်။ ၁၉ရ၅ ခုနှစ် မတ်လတွင်း ပဲခူးရိုမပါတီဗဟိုကျဆုံးပြီး နောက်တွင် အသစ်ဖွဲ့သော ဗဟိုကော်မတီမှ မြေအောက်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံမှာ ရဲဘော်ထွန်း ခေါ် ဗိုလ်ကျင်မောင်ဖြစ်သည်။ သူ၏လက်ထောက်ကတော့ အစောပိုင်းတွင် ဦးဇော်ဝင်း (စစ်ချွမ်းရဲဘော်ဟောင်း – ၂ဝ၂ စစ်ဒေသ...
Than Htay Maung ညီဆောင်းဦး – ကျွန်တော် ခံစားသူ (မိုးမခ) မေ ၇၊ ၂၀၁၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရေးဆရာတော်တော်များများကစာတွေရေးပြီး ဆန္ဒပြုကြတယ်။ ကဗျာတွေနဲ့ဖန်တီးတောင်းဆိုကြတယ်။ ထောက်ပြကြတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစာတွေ၊ ကဗျာတွေတော်တော်များများကိုဖတ်ဖူးခဲ့တယ်။ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး၊ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးခဲ့ကြပေမယ့် အားလုံးကတညီတညွတ်တည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆီကို ဦးတည်နေကြပါတယ်။ တွေးစရာကောင်းလာတာက နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ တူညီတာတခုရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မငြိမ်းချမ်းသေးတဲ့ မိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကို ငြိမ်းချမ်းချင်နေကြတာပါပဲ။ သေချာတာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကြီးကို နိုင်ငံသားတိုင်းမြင်ဖူးချင်နေကြတာပါ။ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေထဲမှာလည်း လိုက်ရှာကြည့်ကြပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးသာ ဓားဆိုရင် တခါမှမသုံးရသေးလို့ သံချေးတက်နေလောက်ပါပြီ။ ဟိုတနေ့ကဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်လိုအပ်နေပြီဆိုတာ ပိုပြီးသိလိုက်ရပါတယ်။ ကဗျာကိုဖန်တီးသူက လင်းခ(မော်လမြိုင်)ပါ။ ကဗျာခေါင်းစဉ်က” ဆူညံနေဆဲအလံတော်”။ ဆူညံနေတယ်ဆိုတာပဋိပက္ခဖြစ်နေလို့ပါ။ ကဗျာပါစာကြောင်းတွေကိုမဖတ်ခင်ခေါင်းစဉ်မှာတင် မငြိမ်းချမ်းတဲ့အရိပ်အယောင်တွေကိုတွေ့မြင်စေပါတယ်။ ဖန်တီးသူဟာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးမွတ်သိပ်နေသူတယောက်ဆိုတာကို သိဖို့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်လုံလောက်နေပါပြီ။...
ကာတွန်း မင်းထက်လူ – အနိမ့်ဆုံးလစာဆိုတာ
ကာတွန်း မင်းထက်လူ – အနိမ့်ဆုံးလစာဆိုတာ (မိုးမခ) မေ ၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ
ရွှေပြည်စိုး – ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန ဖုံးလေသမျှ ဒုရဲမှူး မိုးရန်နိုင် ဖွင့်ချ-(၁) (မိုးမခ) မေ ၆၊ ၂၀၁၈ အင်တာနက် သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ရိုက်တာ (Reuters) သတင်းထောက် ၂-ဦးကို “အမှုဆင် ဖမ်းတယ်၊ ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းတယ်၊ မမှန်တဲ့နည်းနဲ့ အရေးယူခံတယ်” ဆိုတာတွေဟာ အမှန်တွေချည်းပါပဲ။ အဖမ်းခံ သတင်းထောက်တွေရဲ့ ရှေ့နေ ဦးသန်းဇော်အောင်ကလည်း -“စွပ်စွဲခံရသူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ တရားခွင် တင်လာတဲ့ အမှုတွဲတွေမှာ ကွဲလွဲချက်တွေ ရှိတာ တွေ့ရတယ်။ ကျနော် တို့ကတော့ တရားခွင်မှာ ဥပဒေနဲ့အညီ အမှန်တရား ပေါ်အောင် ဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့” ပြောဆို ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ (ဧရာဝတီ၊ ၁၀-ဇန္နဝါရီ-၂၀၁၈)။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ရုပ်သေးသာသာပါ။...
ဇင်လင်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါး ဖွင့်ထားသော်လည်း စစ်ရေး ဖိအားကြောင့် ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစပြုနေပြီ (မိုးမခ) မေ ၆၊ ၂၀၁၈ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးအခြေအနေသည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုအားလုံး “တစ်နိုင်ငံ လုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) ” ကို လက်ခံကာ၊ ၂၁ ရာစုပင်လုံ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင် လာရေးအပေါ် မူတည်နေသည်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် တွေ့ရသည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်က တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုအားလုံး NCA စာချုပ်ကို လက်ခံကာ၊ ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအကျော့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ များတွင် ပါဝင်ကြရန် နှိုးဆော်နေသည်။ ၂၁ ရာစုပင်လုံ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေး ပွဲစင်မြင့်ကို အသုံးချ၍ မိမိတို့...
Europe Day 2018 အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Europe meets Myanmar ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) မေ ၆၊ ၂၀၁၈ Europe Day 2018 အထိမ်းအမှတ် Europe Meets Manmar live in concert ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ကမ်းနား လမ်းရှိ Strand Hotel မှာ မေလ ၁၀ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ Europe meets Myanmar ဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဥရောပ ဂန္တ၀င်တေးသွားများ၊ မြန်မာနဲ့ ဥရောပရိုးရာတေး သီချင်းများကို Maestro Luis Miguel Clemente အမှူးပြုတဲ့ The Orchestra For Myanmar ၊...
၀င်းနန္ဒာ/Myanmar Now – ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများက နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ကျားကန်ပေးနေ (Myanmar NOW) မိုးမခ၊ မေ ၅၊ ၂၀၁၈ ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့ရှိ ဈေးတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားအချို့အားတွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ။ Myanmar Now) မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို ကိုယ်စားပြုထားသော အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်လူငယ်လူရွယ် အများအပြားမှာ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် တိုင်းပြည်တွင်း ဦးနှောက် ယိုစီးမှု ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု ပြော၍ရနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ပြည်ပတွင်ရရှိသည့်ဝင်ငွေ၊ ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းပေးသည့် ငွေကြေးများကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အထောက်အကူဖြစ်သည်ဟု စီးပွားရေးသုတေသီတစ်ဦးက ပြောသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် မေ ၃ က ကျင်းပသည့် “မြန်မာ့စီးပွားရေးနှင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအခြေအနေ” ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောခြင်းဖြစ်သည်။...
ဒေါက်တာသန်းထွန်း – ဆရာအိုရဲ့ဆုံးမစာ (မိုးမခ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း)ေ ဖဖော်ဝါရီ ၀၈၊ ၂၀၁၅ ဆရာအိုတွေရဲ့ ဆုံးမစာလိုချင်တယ် ဆိုလို့ သုတေသန ဖတ်မှ တက္ကသိုလ် အသက်ရှည်မယ် ခုတော့ သုတေသန ဆိတ်သုဉ်းပြီ တက္ကသိုလ်သေပြီပေါ့..။ တက္ကသိုလ် ဆရာတွေ ပါမောက္ခတွေ နားချိန် အားချိန် မရ အောင်စာရင်းလုပ် ဘွဲ့နှင်း အစည်းအဝေး ထိုင် နံရံ ထုံးရိုက် မြောင်းဖော် သစ်ပင်စိုက် ကင်းဆော် ဂုဏ်ထူးတန်းမှာ လူအပြည့် ရိုးရိုးတန်းမှာ လူမရှိ ကျမ်းကို အငှားရေး ခရစ်ဒစ် များများပေး ဒါတွေ ငါမြင် ငါသိ တက္ကသိုလ် နင်တို့ မဖျက် ဘယ်ကောင် ဖျက်မလဲ သန်းထွန်း ...
မြင့်အောင်သန့် – မြစံပယ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင် (မိုးမခ) မေ ၅၊ ၂၀၁၈ မြစံပယ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတယ် တိုက်လေယာဉ်ပေါ် တစ္ဆေတွေ တက်သွားတာ မြင်တယ် ပြည်သူ့ရင်ပြင်မီးလောင်လို့တဲ့ … မီးသတ်ကားဥသြဆွဲသံလည်း မကြားရပါလား ဘေးဘီဝဲယာကြည့်တော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ခပ်နွမ်းနွမ်း လူမမယ်ကလေးတစ်သိုက် ကိုးဆယ်ယောက်မက … စားပွဲတစ်လုံးကို တိုးဝှေ့ထိုင်နေကြတယ်။ မီးဘေးရှောင်လာကြတာများလား … တစ်ယောက်က ပါးစပ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ကပ်ပြီးပြတယ် ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့ သင်္ကေတ ပြီးနောက် ကားလမ်းမပေါ် တက်သွားကြတယ်။ ကားတွေက မောင်းမြဲမောင်းလျက် ဟော… တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် မြစ်ထဲ ခုန်ချသွားကြတယ် ဘေးဘီ ဝဲယာကြည့်တော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ မြစံပယ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်နေတယ်။ Tags: မြင့်အောင်သန့်
ဒေါက်တာလှဘေရဲ့အတွေးအမြင်စာအုပ် တတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေ K (မိုးမခ) မေ ၅၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာကြီးဒေါက်တာလှဘေရဲ့ပညာပါရမီနှင့် အတွေးအမြင်စာစု စာအုပ်ကို ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်ကနေ တတိယအကြိမ်မြောက် ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ဆောင်းပါးများကတော့ – ၁။ ဆရာ့ထက် လက်စောင်းထက်သော တပည့်နှင့် ကျွန်တော်၏အတွေး အမြင်၊ ၂။ ပုထုဇဉ်သားဟူသမျှ မှားမည်သာ။ သို့သော် ၃။ ဦးချိန်၏မော်ကွန်းသဒ္ဒါ ဗျူပ္ပတ် အဓိပ္ပာယ်နှင့် ကျွန်တော့် အတွေ့အမြင်၊ အတွေးအမြင်၊ ၄။ ဂျဲလ်ထလ်မဲန်း၊ လေဲးဒီနှင့် မေတ္တာတရား ၅။ ဆရာဝန်များနှင့် ဇိဝိတ ၀ိနယ ၆။ အိမ်ရှင်မများနှင့် ကလျာဏ ၀ိနယ ၇။ ဒီဂရီဘွဲ့ (၁) တက္ကသိုလ်ခံယူချက် ၈။ ဒီဂရီဘွဲ့ (၂) ပြင်ပခံယူချက် ၉။...
KT# ရှင်သန်ပါ လင်းသက်ငြိမ် (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၈ လူ့အဖြစ်ဟာ ဘယ်ဘဝကကျလာတာလဲ အဲ့ဒီလိုစလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုဆုံးရမယ်မသိသေး ရောမမြို့ကြီးလည်း တစ်ရက်တည်းဆောက်ခဲ့တာမဟုတ် လူလည်း တစ်ရက်တည်းအရွယ်ရောက်ကြီးပြင်းလာတာမဟုတ် ဒီလောက်ဆိုရွာလည်လို့ရပြီ ဆက်လျှောက် ဖိနပ်သံ တရှပ်ရှပ်မြည်အောင် လျှောက် တခါတလေ လက်ထဲက စားစရာပြုတ်ကြတယ် တခါတလေ စားစရာထဲ လူကိုယ်တိုင်ပြုတ်ကြတယ် အထက်နဲ့အောက်ကို တစ်ကြောင်းစီသွားကြည့်တာ အပေါ်ကိုရောက်ဖို့သာအချိန်လိုတာပါ အဆင်းက နာရီပတ်မထားဘူး နွေအကြိမ်ကြိမ် မိုးအကြိမ်ကြိမ် ဆောင်းအကြိမ်ကြိမ် ကျိန်စာတစ်လှည့် ဆုလာဘ်တစ်လှည့် ခဏခဏကျရှုံးရ ခဏခဏစိတ်ဓာတ်တက်ကြွရ နေရတုန်းတော့ပျော်ပျော်ပေါ့ ငိုစရာရှိငို ပျော်စရာရှိပျော် ဆဲရေးစရာရှိဆဲရေး မေတ္တာပို့စရာရှိမေတ္တာပို့ ခြေနင်းဖတ်ထဲက မြက်ပင်တွေသေဖို့မတွေးဘူး ဆီးပြီးပွေ့ထားလို့မရမှတော့ ကြယ်ကြွေတာအလကားပဲ လေလည်လိုက် ပြေလည်လိုက်နဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ဘီးတွေပြေးလွှား အိုးကင်းပူထဲရောက်တာတောင် ပွင့်ပြသွားတဲ့ ပြောင်းဖူးတွေ...
ကာတွန်း ကိုခေတ် – ခေါင်ထိ အကုန် (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုခေတ်
အေးငြိမ်း – စနစ်သစ်ပညာရေးနှင့် ကျွန်ုပ်အကြောင်း (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၈ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပို့လာ၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထက်အရာရှိဆိုသူများက ပေါက်တတ်ကရ အမိန့်တွေထုတ်ကာ ပညာရေး စနစ်ကို ဖျက်ဆီးနေပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပညာရေးပိုင်းကို စီစစ်ကြပ်မတ်ပေးပါရန် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ ရေးထားသော ပညာရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ စာကို ဖတ်လိုက်ရပါသည်။ ထိုစာဖတ်မိပြီး ခေါင်းထဲသို့ အတွေးတစ်စ ဝင်လာသဖြင့် ရေးလိုက်ရပြန်ပါကြောင်း။ (ကျုပ်က အမှန်တွေ ရေးပြတာ။ တရားစွဲတာတွေ ဘာတွေ မလုပ်နဲ့နော။ ကျုပ်က ကြောက်တတ်တယ်။) Ref: link: https://www.facebook.com/451408591693369/photos/a.523713597796201.1073741829.451408591693369/786163011551257/?type=3 မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာရေးစနစ်ကြီးအကြောင်း အများပြည်သူသိပြီးဖြစ်၍ မပြောလိုတော့ပါ။ ကျွန်တော် ပြောချင်သည်မှာ စနစ်သစ်ပညာရေး ဆိုတာကြီးအကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်လူမှန်းသိတတ်စ အရွယ်ကတည်းက စနစ်သစ်ပညာရေး...
စွန့်ပစ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ မွန်ဟော်စီရဲ့အင်စတော်လေးရှင်းပြပွဲ K (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၈ စွန့်ပစ်လူသုံးကုန်အမှိုက်များကို ပြန်လည်အသုံးပြုဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ စာရေးဆရာမ၊ အင်စတော်လေးရှင်း တင်ဆက်သူ မွန် ဟော်စီ Mon Halseyရဲ့(၅)ကြိမ်မြောက် တစ်ကိုယ်တော်ပြပွဲ ‘လှသော အမှိုက်များ (Beautiful Trash)’ အမည်ရတဲ့ အင်စတော်လေးရှင်းပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ရှိ The Yangon Gallery မှာ မေလ ၅ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ၆ ရက် နေ့ထိ ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါအင်စတော်လေးရှင်းပြပွဲမှာ ပြန်လည်အသုံးပြုရတဲ့ ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ ရေသန့်ဘူး၊သတင်းစာစက္ကူ၊ ပလတ်စတစ်၊ သစ်ကိုင်းခြောက်တို့နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Installation Arts များကို ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး ပြပွဲချိန်အတွင်း မွန်ဟော်စီရေး သားထားတဲ့ “စိတ်ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့”စာအုပ်ကို အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးရောင်းချသွားမှာလည်း ဖြစ်ကြောင်း...
တေးရေးဆရာ သော်ဒီဝေ၏ သတ္ထုသံပါသော သီချင်းများရှိုး မေလ ၅ ရက်နေ့ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ။ မေ ၄၊ ၂၀၁၈ ကဗျာဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊ တေးရေးဆရာ ဝေချစ်ကို(ခ) သော်ဒီဝေရေးသားခဲ့ပြီး တခေတ်တခါကျော်ကြား အောင်မြင်ခဲ့ တဲ့ရော့စ်သီချင်းများသီဆိုမယ့် A Tribute Concert ရှိုးကို ရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းရှိ အမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာ မေလ ၅ရက်(စနေနေ့)၊ ည ၇နာရီမှာ ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ A Tribute to Thaw Di Wai Concert မှာ ပါဝင်သီဆိုကြမယ့် အဆိုတော်များကတော့ လေးဖြူ၊ အငဲ၊ ဖိုးကျော်၊ ဂျီ လတ်၊ သအို၊ M သီဟ ၊ကျော်ဇင်သိုက်၊ကိုးနိုင်း၊ သားငယ်၊ အိမ့်ချစ်၊...
မောင်မိုးသူ – နာရေး သက်ကြီးနှင့် ဘကြီးမိုး (ကုမုဒြာအွန်လိုင်း၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ မေ ၄၊ ၂၀၁၈ ပြည်သူ့ရင်ပြင် မောနင်းစတား သော ကြာဝိုင်း လူစုံတုန်းမှာ သားငယ်ညီညီက မမကြည် ကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းကို ပြောပြပါတယ်။ မမကြည်ဆိုတာ သူငယ်ချင်း အ ထောက်တော်လှအောင်ရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မမကြည်ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၉၇ နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ ဘကြီး မိုး အံ့ဩရပါတယ်။ မမကြည် အသက်ကြီးပြီ ၊ ၉၀ ကျော်တာတော့ ဘကြီးမိုး သိပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ၉၇ နှစ်ဆိုတာတော့ ထင်မထားမိဘူး။ ကိုလှအောင်တို့ မမကြည်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာ သတင်းဂျာနယ်ခေတ်ကတည်းက ဘကြီးမိုးတို့ သူငယ်ချင်းတစ်သိုက်ပေါ်မှာ ဆိုးမျိုးခံပြီး တိုက်ကျွေးပြုစုခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါ...
ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now – ရဲတရားရုံးစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းမကျဟု ဦးမိုးရန်နိုင် မိသားစုကိုပြော (Myanmar Now) မိုးမခ၊ မေ ၄၊ ၂၀၁၈ မေ ၃ ရက်နေ့က ဒုရဲမှူးဟောင်း ဦးမိုးရန်နိုင်ကို ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခဲ့သည့် မိသားစုဝင်များကို မြန်မာနောင်းသတင်းဌာန ရုံးခန်းတွင်တွေ.ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ – ထက်ခေါင်လင်း/ Myanmar Now) (ရန်ကုန်) – ရိုက်တာသတင်းထောက်များ ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်ဟု တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုခဲ့ခြင်းမှာ အရေးယူခံရမည်ကို သိလျက်နှင့် ထွက်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းနောက်ပိုင်း ရဲတရားရုံးတွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိဘဲ စစ်ဆေး စီရင်ခံခဲ့ရကြောင်း ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်က အင်းစိန်ထောင်တွင် မိသားစုဝင်များနှင့် မေ ၃ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားလိုက်သည်။...
ကျော်ဟုန်း – ခက်တော့တာပဲ (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၈ ခက်တော့တာပဲ နှမ်းတောင် ဝင်မဖြူးတဲ့သူက ထမနဲကို အရင်ဆုံးစားချင်နေတယ်။ စစ်ဖြစ်နေတုန်း ကတုတ်ကျင်းထဲ ခေါင်းမဖော်ရဲသူက မိုးပေါ်ထောင်ဖောက်တဲ့ ကျည်ကိုရင်းပြီး သူရဲကောင်းစာရင်းဝင်ချင်နေတယ်။ စေတနာ ၃ တန် မပါတဲ့အလှူရှင်လို မဏ္ဍပ်တိုင်ထိပ်ချိတ်မယ့် မင်းနာမည် လေထဲလွှင့်မပျောက်ခင် ပြောချင်ရဲ့ ။ အလုပ်ဂုဏ်မြောက်အောင် လုပ် မလုပ်ဘဲနဲ့နာမည်လိုချင်ရင် ကမ်းစပ်သဲခုံပေါ် မင်းနာမည်ရေးမိတောင် ကမ္ဘာချီ ပြက်ရယ်ခံရနိုင်တယ် ခက်တော့တာပဲ။ ။ ၂၀၁၈ – မေ – ၀၃ No tags for this post.
ကာတွန်း Omega – နောင်တခေတ် (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - Omega
မောင်မောင်စိုး ● ကွယ်လွန် နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ – (၁၉ရ၅-၁၉၈ဝ) – အပိုင်း (၇ဝ) (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ ● အနောက်မြောက်တိုင်း ၁၉ရရ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ပြည်တွင်း၌ရှိနေသေးသော အခြေခံဒေသမှာ အနောက်မြောက်တိုင်းဖြစ်သည်။ အနောက်မြောက် တိုင်းသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုစကတည်းက အခြေချခဲ့သော အခြေခံဒေသတခုဖြစ်သည်။ မူလဖွဲ့စည်းပုံ အရ အနောက်မြောက်တိုင်းအတွင်း ပခုက္ကူခရိုင်၊ သရက်ခရိုင်၊ မင်းဘူးခရိုင်၊ မုံရွာခရိုင်၊ စစ်ကိုင်းခရိုင်တို့ပါသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အားယုတ်လျော့ခဲ့သည့်ဒေသဖြစ်သည်။ ၁၉ရရ ခုနှစ်ခန့်က အနောက်မြောက်တိုင်းအားဦးဆောင်နေသူမှာ ဗိုလ်သက်ထွန်းဖြစ်ပြီး ၁၉ရ၅ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း သော CPB ဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ဗိုလ်သက်ထွန်းသည် ဗမာ့တပ်မတော် သနက ၁ အားခေါင်းဆောင်ပြီး တောခိုလာသည့်...
ကာတွန်းရွှေဗိုလ်ရဲ့ ဘယ်အပေါက်ထိုးရမယ် မသိ … (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းရွှေဗိုလ်
သားကြီးမောင်ဇေယျ – ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစာအသုံးအနှုံး (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ သံတမန်အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့(၁/၅/၁၈) မနက် ၉ နာရီခွဲက ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိလာပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ မောင်တော ဒေသကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ကိုဝဏ္ဏ ခွာညိုရဲ သတင်းကို DVB newsroom ကွန်ယက်မှာ ဖတ်လိုက်ရတော့ သြော် . . သူတို့ကိုယ်တိုင် လာကြည့်ကြပြီကိုး လို့ စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်မိပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို အတော်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေက မကြာခဏ မှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီ သွေးနုသားနု အချိန်မှာ ခုလို အဖြစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတိုးတက်မှုတွေ တုန့်ဆိုင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအရေးကို...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● အီသီယိုပီးယား (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂ဝ၁၈ ● နိဒါန်း မေလ ၂ဝ၁၈ မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ၁ဝ နှစ်မြောက် အောက်မေ့သတိရကြပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီး၊ ၁ဝ နှစ်မြောက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ၁ဝနှစ် အကြာမှာ တခါက ငတ်ပြတ်ခဲ့တဲ့ အီသီယိုပီးယားနိုင်ငံ အကြောင်း ရေးချင်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံက အီသီယိုပီးယား ဆင်းရဲမွဲတေမှုလောက် မဆိုးသေးပေမဲ့ သူ တို့နိုင်ငံက လေ့လာစရာတွေရှိပါတယ်။ ၁။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိန်လှီစုတ်ပြတ်နေရင် အီသီယိုပီးယားကလာသလားလို့ နောက်ပြောင်ပြောကြပါတယ်။ အီသီယိုပီးယား နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံထက် လူဦးရေ ၂ ဆလောက် (၁ဝ၅ သန်း) ရှိပြီး၊ ဧရိယာ...
K ငြိမ်းချမ်း – ကဗျာဆရာနေမျိုးရေးတဲ့ အက်ဆေးစာအုပ်အသစ်ထွက်ရှိ (မိုးမခစာအုပ်စင်) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ မန္တလေးအခြေစိုက် ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာ နေမျိုးရဲ့ရေအိုင်ငယ် အက်ဆေးများ စာအုပ်သစ် ယခု မေလဆန်းမှာ လင်းသစ် ရောင်စဉ် စာအုပ်တိုက်မှ ထွက်ရှိလာပါတယ်။ ရေအိုင်ငယ် အက်ဆေးများစာအုပ်မှာ အက်ဆေး အပုဒ်ရေ ၄၀ ပါဝင်ပြီး ပါဝင်တဲ့ခေါင်းစဉ်များကတော့ ရေအိုင်ငယ်၊ ထ မင်းစေ့ကလေး၊ အရုပ်ဆိုးသူနဲ့ဧကရီ၊ ပလူတွေ၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်၊ အမှောင်ထဲက နေ့ရက်များ၊ ရောက်မလာတဲ့စံပြမယ်၊ ထ မင်းကြမ်းစားသူ၊ ဆောင်းကျွတ်ပြီ၊ ပထွေး၊ ဖန်ပုလင်းတစ်ခု၊ စိုးအောင်စာအုပ်၊ ဧပြီလရဲ့နံနက်၊ ဧပြီလရဲ့နေ့လယ်၊ ဧပြီ လရဲ့ ညနေ၊ ဧပြီလရဲ့ညခင်း၊ ပုံပြောသူအဖေ၊ ပရိတ်ကြီးရွတ်သူအမေ၊ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြုံးရယ်နေသူ၊ ဆယ်ပြားစေ့ကလေး နှစ်...
ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်ကို မယုံကြည်ထိုက်သည့်သက်သေအဖြစ် လျှောက်ထားမှုကို တရားရုံးက ပယ်ချ ထက်ခေါင်လင်း/Myanmar Now ။ (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ ဧပြီ ၂ ရက်နေ့က တရားရုံးတွင် တွေ့ရသော သတင်းထောက် ကိုဝလုံး ရန်ကုန် (Myanmar Now) — ရိုက်တာသတင်းထောက် ၂ ဦးအမှုတွင် ဒုတိယရဲမှူး မိုးရန်နိုင်သည် မယုံ ကြည်ထိုက်သည့် သက်သေဖြစ်ကြောင်း တရားလို၏ လျှောက်ထားမှုကို အင်းစိန်မြို့နယ် တရားသူကြီးက မေ ၂ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ပယ်ချလိုက်ပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ သတင်းထောက် ၂ ဦးဖြစ်သည့် ကိုဝလုံး (ခ) ကိုသက်ဦးမောင်၊ ကိုကျော်စိုးဦးတို့ကို အရေးယူနိုင်ရန် ထောင်ချောက်ဆင် ဖမ်းခဲ့သည်ဟု ဒုရဲမှူးက တရားခွင်တွင်...
မြစ်ကြီးနားရှိ ကချင်လူငယ်ထုသပိတ်အဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူများအကြား ညှိနှိုင်းမှု ပြေလည်မှုမရရှိသေး အောင်ငြိမ်းချမ်း / Myanmar Now ။ (မိုးမခ) မေ ၃၊ ၂၀၁၈ ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံးက ထုတ်ပြန်သည့် မြေပုံတွင် တပ်မတော်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ၊ KIA နယ်မြေတို့ရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ တည်ရှိသည့် နေရာကို အပြာ၊ အနီ တြိဂံပုံစံဖြင့် ပြထားသည်။ ဧပြီလအတွင်း ထွက်ပေါ်လာသော စစ်ပြေးအရပ်သားတို့ ရှိသည့် နေရာကို စက်ဝိုင်းဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ဧပြီ ၁ မှ ၁၈ အတွင်း ပဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက်သည့်နေရာတို့ကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ရန်ကုန် (Myanmar Now) — ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသည့် တပ်မတော်နှင့် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲများအတွင်း ပိတ်မိနေသော ဒေသခံပြည်သူများ...
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်စစ်တမ်းရလဒ်ကို လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံသို့ ပေးပို့မည် (မော်လေး / Myanmar Now ) မိုးမခ၊ မေ ၃၊ ၂၀၁၈ မေ ၂ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ စာနယ်ဇင်းအရောင်းဆိုင်တစ်ခုတွင် တွေ့ရသော သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များ (မော်လေး/Myanmar Now) ရန်ကုန် (Myanmar Now) — သတင်းထောက်များ၏ အမြင်သဘောထားများကို ကောက်ယူထားသည့် ‘ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော မြန်မာ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်’ အမည်ရှိ စစ်တမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံသို့ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်တမ်းကောက်သည့်အဖွဲ့က ပြောသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကို ‘လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း (မြန်မာ) FEM’ အဖွဲ့က သတင်းမီဒီယာလောကမှ လူဦးရေ ၂၀၀ ၏ သဘောထားများကို ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလမှ ယခုနှစ်...
Page4of 896«1...23456...896»
>Than Win Hlaing - Galon U Saw
>Sayadaw U Nyanithara meets with Friends of the Citizen of Burma Award